[लोकान्तर डट्कममा २०७५ असार १७ गते प्रकाशित सामग्री अर्काइभबाट ...]
छोराले बरखी बार्छ
इतिहासले बरखी बार्छ । (क. मदन भण्डारी)
यी मार्मिक कविताका हरेक विम्बहरूमा कता–कता मदन भण्डारीको आत्मा बोलेजस्तो, प्रेत जागेजस्तो लाग्छ । हुन त मैले यसलाई कविताको नामकरण गरें तर यो कविता हो कि हैन थाहा छैन । पूर्वानुमान गरेजस्तो आफ्नै जीवनसँग मेल खाने यी सुन्दर हरफहरू भण्डारीले कुन घुम्तीमा रोकिएर कोरेका थिए होलान् ? के उनलाई आफ्नो अकल्पनीय मृत्युका बारेमा अग्रिम शंका थियो ?
तिनीहरूले धेरै चीज गरे । तर केवल तिनीहरूले एउटै काम कहिल्यै गरेनन् । अझ भनौं गर्न चाहेनन् । त्यो हो, तिनले आफ्ना प्रिय नेताको हत्यारा को हो ? त्यो थाहा पाउन खोजेनन् । आफ्नै पार्टीका नेताहरू पटकपटक सरकार प्रमुख (प्रधानमन्त्री) हुँदासमेत मदन भण्डारीको हत्यारा किन पत्ता लागेन भनेर तिनीहरूले कहिल्यै सोधेनन् । शायद तिनीहरू प्रश्नहरूसँग थाकिसकेको हुनुपर्छ । प्रश्नहरूसँग सम्झौता गर्ने आदत भइसकेको हुनुपर्छ । तर हरेक जन्मजयन्ती र स्मृति दिवसहरूमा आम जनताको एउटै प्रश्न छ, मदन भण्डारीको हत्यारा को हो ?
तिनीहरूलाई चेतना होस्, मदन भण्डारीको सच्चा सम्मान चारतारे होटलमा भेला भएर, सरकारी रकम दुरुपयोग गरेर अनि जबजको मात्रै चर्चा गरेर हुँदैन । उनको सम्मानको लागि त हत्याराको खोजी गरेर हुन्छ । मदन भण्डारीको सच्चा सम्मान, कुनै गोष्ठीमा समारोहमा एक थाल मासु र पुलाउ खाएर हुँदैन । उनको सम्मानका लागि त मदनले देखेका सपनाहरूलाई पुरा गरेर हुन्छ ।
यहाँ एकथान राजा रहने र नरहने कुराले त्यति ठूलो अर्थ राख्दैन । तर मुलुकमा नोकरशाही पूजीँपतिहरूको हालीमुहाली रह्यो भने राजा रहेपनि नरहेपनि जनताको मनमा खुशियाली आउनेछैन ।
इतिहासले बरखीबारेको दिन
यो प्रसंग अब अपडेट गरिरहनुपर्ने त हैन, तर पुनर्ताजगीका लागि मात्र । त्यो के भने २०५० साल जेठ ३ गते नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड अन्तर्गत दासढुंगामा रहस्यमय जीप दुर्घटनामा परेर तत्कालीन एमाले महासचिव मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको मृत्यु भयो । यो दुर्घटना थियो या हत्या भन्ने कुरा अझैसम्म गर्भमै छ । तर नेपाली इतिहासले बरखी भने बार्‍यो ।
दुध नालीमा बगाउने किसानलाई विश्व वातावरण दिवसको ...
लज्जावती झार झैं बन्द हुने हाम्रा बजार
नेपाल : जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन